Androany dia hisintona ny sainao aho amin’ny alàlan’ny tenin’ANDRIAMANITRA iray, ny amin’izany atao hoe hatsaram-panahin’ANDRIAMANITRA izany, izay tiany hananao ihany koa, tiany hananan-tsika ihany koa. Hitafiantsika mba hahatonga antsika mba hanana vokatra tsara, hahatonga antsika ho tonga fitaovana mahery eo anatrehan’ANDRIAMANITRA, araka ny nataony tamin’i Paoly hoe : « fa izao no nandidian'ny Tompo anay: Efa nanendry Anao ho fahazavan'ny jentilisa Aho, Mba ho famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany Hianao (Isa. 49. 6). » (Asan'ny Apostoly 13:47) « Fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. » (Matio 24:13)
Tsy hoe izay maharitra ao anatin’ny iray andro na herinandro, fa « jusqu’à la fin. » Any ny famonjena no miandry.
« Ary Jesosy namaly ka nanao hœ: Nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema hankany Jeriko ka azon'ny jiolahy, dia nendahany ny lambany, sady nokapohiny izy, dia nilaozany, rehefa saiky maty. « Ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalana izany; ary raha nahita an-dralehilahy izy, dia nandalo azy. « Ary toy izany koa ny Levita anankiray, izay tonga teo, dia nahita azy, nefa nandalo koa. « Fa nisy kosa Samaritana anankiray nandeha tamin'ny nalehany ka tonga teo aminy, ary nony nahita azy, dia onena. « Dia nanatona izy, ka nofeheziny ny feriny, sady nasiany diloilo sy divay; dia nampitaingeniny tamin'ny bibiny izy, ka nentiny ho any amin'ny tranom-bahiny, dia notsaboiny. « Ary nony ampitson'iny, dia naka denaria roa izy, ka nomeny ny tompon'ny tranom-bahiny, sady nanao taminy hœ: Tsaboy izy; ary na hoatrinona na hoatrinona no laninao mihoatra noho ireto dia honerako, rehefa miverina aho. » (Lioka 10: 30-35)
Indray mandeha, fony zanako mbola kely, mbola teo amin’ny 2 taona latsaka teo izy tamin’izay, ny zanako voalohany, narary mafy izy tamin’izay, ary tsaroako tsara tamin’izay, fa teo an-tànanay mivady tena tsy nisy mihintsy. Tao anaty fahasahiranana izahay tamin’izay, ary nipetraka alavitra be, ary dia tsy mba nisy na iza na iza ho sarangotina loatra. Tany am-piasana aho tamin’izay fotoana izay no nantsoin’ny vadiko fa nitombo be ny hafanan’ilay zaza, ka hoy izy hoe : avia ianao fa tsy fantatra na ho entina any amin’ny hopitaly ity zaza ity na hatao ahoana ; tonga aho, dia niteny tamin’ny vadiko hoe : isika hoy aho tsy manana na inona na inona fa andao isika hivavaka. Ny tonom-bavaka izay nataonay dia izao : « JESOSY ô, tena « vide », tena « vide » mihintsy, raha hoe kitapom-bola izany no resahana, tena tsy manana izahay. Fa izao JESOSY a, izaho manompo anao, ka raha mba nisy zavatra, na dia kely fotsiny mba mety mba nahafinaritra ANAO mba nataoko, na kely fotsiny aza. Amin’ny Anaranao JESOSY, sitrano ity zaza ity. » Ny « après-midi » ihany ilay zaza tonga dia nitsangana. Tsy nankany amin’ny dokotera izany izahay mivady tamin’izay fotoana izay. Aleloia ! Tsy hoe ratsy ny mankany amin’ny dokotera, fa mba nisy zavatra kely tato aminay mivady, naborakay tamin’i JESOSY. Teo aho ry havana dia tena resy lahatra mihintsy hoe na dia zavatra kely aza no ataonao ho an’ANDRIAMANITRA ka ankasitrahany, dia tsy ilay « volume » izany no zava-dehibe hoe inona no titre entinao ? Fa na kely fotsiny aza, dia « important » amin’ANDRIAMANITRA izany zavatra izany.
Eto amin’ity tenin’ANDRIAMANITRA ity an, dia misy zavatra manala baraka ny jiosy mihintsy, satria izao no zavatra nitranga teto : satria hoy izy hoe : nisy olona iray avy any Jerosalema ho any Jeriko. Araka ny tantara sy ny fandinihana, ity olona ity izay voaendaka efa saiky maty dia jiosy izy io (ny mpanendaka izany dia efa nisy hatramin’izay). Dia rehefa nitsirara tamin’ny tany io olona io an, dia nandalo ny mpisorona fa nandalo fotsiny. Ny mpisorona izay mpanonitra ny enta-mavesatry ny olona, fa nandalo fotsiny rehefa nahita an’io olona io. Jereo amin’izany anie e, io zavatra nitranga io dia fanoharana no nataon’i JESOSY teto an, « parabole » ; nandalo koa ny levita rehefa avy eo fa nijery fotsiny. Fa nisy lehilahy iray hoy IZY, samaritana. Any amin’ny lohateny moa dia milaza hoe : « samaritana tsara fanahy » ; dia rehefa nahita an’io ilay samaritana, dia nijanona mihintsy izy, dia nofeheziny ny feriny, dia nampiakariny teo ambonin’ny borikiny ilay olona, dia nentiny avy eo.
Ny zavatra tiako hampahafantarina anao dia izao, ny samaritana sy ny jiosy an, dia tena tsy misy ifandraisana mihintsy na ny kely aza. Ny olona ao Samaria izany sy ny jiosy, na mifanena eny an-dalana aza mifampiavonavona. Tsy misy idirany mihintsy izany ny samaritana sy ny jiosy e, izay no tena marina. Fa teto amin’ity indray mandeha ity, dia nisy idirany ny samaritana sy ny jiosy, satria nahoana ? Satria tsara fanahy ilay samaritana. Tsy ny samaritana rehetra akory no tsara fanahy an, fa misy samaritana mety ho ratsy fanahy. Tsy ny jiosy rehetra akory dia ratsy fanahy an, fa misy jiosy, mety ho tsara fanahy ihany koa. Tsy ny malagasy rehetra akory dia tsara fanahy, fa mety misy malagasy ratsy fanahy koa. Fa teto an, dia nisy ifandraisany ny jiosy sy ny samaritana, satria tsara fanahy ilay samaritana, ary izay no tena « centre » an’ity tenin’ANDRIAMANITRA ity. Samaritana tsara fanahy, rehefa tsara fanahy ilay samaritana dia nofeheziny ilay olona marary, dia nentiny ho tsaboina. Hoy izy hoe : ity misy denaria roa an, « valeur » be izany denaria izany fa lazaiko anao !
Dia nentiny tany an-trano fitsaboana dia hoy izy hoe, ity misy olona marary, dia tsaboy io, tsy fantatro io, na iza na iza ; fa ny zavatra fantatro dia izao marary io olona io, tsaboy io olona io. Inty ny « frais médicaux », raha mbola tsy ampy iny, dia « rembourser »-ko rehefa miverina aho. Tsy « possible » mahavita an’izany ianao ry havana raha tsy any aminao ilay FANAHY MASINA. Tsy « possible » mahavita izany ity samaritana ity, raha tsy ilay samaritana tsara fanahy. Izany hoe misy « qualification » izany an, tao amin’ilay samaritana, dia ilay samaritana maha tsara fanahy azy. Tsy misy ifandraisany mihintsy hoy aho ny jiosy sy ny samaritana, tena tsy misy mihintsy na ny kely aza. Miady mihintsy aza ! Fa teto amin’ity fotoana indray mandeha ity an, dia nifandray ry zareo. Satria misy an’ilay Fanahy nampifandray azy.
Toy izany anie no zavatra nitranga tamin’ny fotoana izay nankanesan’i JESOSY teo amin’ny fantsakana iray, dia nisy ilay vehivavy nantsaka e, JAONA toko faha-4. Io vehivavy io an, dia samaritana. Dia rehefa nandeha ilay ady hevitra niaraka tamin’i JESOSY teo an, dia hoy izy nony farany hoe : « Hoy ravehivavy taminy: Tompoko, omeo izany rano izany aho, mba tsy hangetaheta na hanketo hantsaka intsony. » (Jaona 4:15) Satria tena tsapan’ilay vehivavy fa tena misy an’ilay rano ato amin’ity olona ity. « Hoy Jesosy taminy: Andeha ary, antsoy ivadinao, ka mankanesa aty . » (Jaona 4:16) « Ravehivavy namaly ka nanao taminy hœ: Tsy manam-bady aho. Hoy Jesosy taminy: Marina ihany izay nolazainao hœ: Tsy manam-bady aho; » (Jaona 4:17)« fa efa nanam-bady indimy ianao, sady tsy vadinao ilay itœranao ankehitriny; marina izany voalazanao izany. » (Jaona 4:18) Tratra teo ny lainga ! « Hoy ravehivavy taminy: Tompoko, hitako fa mpaminany Hianao. » (Jaona 4:19) Hiandry an’ilay tenenin’ny Tompo tahaka izay ve izay vao hanaiky marina hoe tena mpaminany ity olona ity.
Dia hoy ilay vehivavy hoe : « Ny razantsika nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity; fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana. » (Jaona 4:20) « Corriger »-ko izany hoy JESOSY. Diso daholo izany rehetra rehetra izany fa : « Hoy Jesosy taminy: Ravehivavy, minoa Ahy, fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity, na any Jerosalema aza, no hivavahanareo amin'ny Ray« Hianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo; izahay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. « Fa avy ny andro*, sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny Ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana; fa ny Ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. [*Gr. ora] » (Jaona 4:23)
Tsy any Jerosalema, tsy any amin’ity tendrombohitra ity. Na aiza na aiza no itondranao ny Tompo ka manana fanahy tsara ianao, afaka manasitrana ianao. Na aiza na aiza toerana alehanao. Ary izay no nahatonga an’i Paoly niteny hoe : « Diniho ny tenanareo, na mitœtra amin'ny finoana ianareo, na tsia; izahao tœtra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo, fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona nolavina ianareo ? » (2 Korintiana 13:5) Raha tsy hoe olona nolavina angaha ianao, dia tsy ao anatinao izay KRISTY. Misy tenin’ANDRIAMANITRA izany an, izay tena tsara fantarina tsara mihintsy hoe, tsy ilay « titre » mihintsy akory, tsy ilay amin’ny maha samaritana azy, fa ny amin’ny maha tsara fanahy azy. Nanekeny hanasitra ity olona ity.
Androany aho dia te hiteny aminao hoe : nisy olona nanana « titre » ambony be anie teto e ! Mpisorona izay mitondra ny « document » ny fahotan’ny olona. Indray mandeha isan-taona, fara-fahakeliny ao amin’ny tempoly, ao an-tempoly dia misy ny atao hoe ny atao hoe toerana masina, dia misy koa ny atao hoe toerana masina indrindra. Ny mpisorona be irery ihany no mahazo miditra amin’izany toerana tena masina indrindra izany, indray mandeha isan-taona. Fa ny mpisorona tsotra dia miditra ao an-tempoly matetika, mitondra ny fahotan’ny olona ary mivavaka, manonitra an’izany. Saingy « titre » fotsiny ilay an’ny mpisorona, fa rehefa nahita an’ilay marary izy an, nolalovany fotsiny ilay izy. Tsy « titre » no angatahin’ANDRIAMANITRA aminao, fa ilay fanahy izay fanahy tsara, ho entinao mitsabo olona iray.
Ny zavatra faha-roa tiako ho tenenina anao dia izao hoe, ilay fitiavana tsy mila tambiny.
Indray mandeha i Petera sy Jaona, hiditra ao an-tempoly, dia nisy lehilahy nipetraka nangataka teo am-baravaran’ny tempoly izay lehilahy nalemy hatrany an-kibon-dreniny. Nangataka foana no ataony eo an-tempoly. Dia nangataka tamin’i Petera sy Jaona koa izy. Koa satria fantatr’i Petera sy Jaona fa volafotsy sy volamena no angatahiny, nefa tsy nanana izany izy roa lahy, « Fa hoy Petera: Tsy manana volafotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao: Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitsangantsangàna. » (Asan'ny Apostoly 3:6) Tonga dia nitsangana « tout de suite » ilay olona ! Ny tiana ho tenenina anao androany amin’izay tenin’ANDRIAMANITRA izany dia izao tsy « posssible » amin’ny olona ny manome raha tsy manana izy. « Possible » amin’ny olona ny manana « titre », fa tsy manan-komena izy. Fa « possible » amin’ny olona ny tsy manana « titre » mihintsy, fa manan-komena kosa izy. Ny samaritana sy ny jiosy anie hoy aho tsy misy ifandraisany mihintsy na ny kely aza e, fa izao, nanan-komena izy, satria tao anatiny ilay fanahy, ilay mampiavaka azy amin’ny samaritana rehetra. Ilay nampiavaka azy amin’ny jiosy rehetra ihany koa.
Izaho tsy jiosy, fa manana aho ka ho vonjeko ity olona ity. Ny jiosy anie tokony ho nanana e, raha ny tena marina satria hoy ny tenin’ANDRIAMANITRA hoe : « Fa tsy menatra ny filazantsara aho; fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany, amin'ny Jiosy aloha, dia vao amin'ny jentilisa* koa. [* Gr. Grika] » (Romana 1:16) « Avantage » tsy roa aman-tany anie izany rahalahy sy anabavy e ! Amin’ny jiosy aloha izay vao amin’ny jentilisa koa. Tsy misy ifandraisany mihintsy izany ny amin’ny maha-jiosy azy an, sy ny amin’ny maha-olon’ANDRIAMANITRA azy. Tsy misy ifandraisany mihintsy anie ny amin’ny maha-malagasy anao sy ny amin’ny maha olon’ANDRIAMANITRA anao e ; fa ianao ve olon’ANDRIAMANITRA aloha ? Izay no tokony handeha aloha ! Manana ve ianao ? Izay vao afaka hizara. Fa ity fanana ity mantsy ry havana, tsy zavatra henjikenjehana izy ity na zavatra indramina. Fa zavatra fanomezan’ANDRIAMANITRA ny fanahinao. Jereo tsara anie fa sendra nandalo fotsiny i Petera sy Jaona an, izay ananako no omeko anao hoy izy amin’ny anaran’i JESOSY mitsangana ! Avy ilay lehilahy dia nitsangana, vita ny resaka ! Tsy nisy na inona na inona natao, tsy nisy na inona na inona nomena. Asa io lehilahy io raha mba niditra nankao amin’ny tempoly na nankaiza, na nankeny amin’ny bazary aloha mba niantsena fa efa ela tsy nitsangana. Fa dia amin’ny anaran’i JESOSY mitsangana ! vita ! onerako rehefa miverina aho ! Fitia tsy mila tambiny, fa izaho indray aza mbola manome. Isika malagasy anie ry havana, tsy misy ifandraisana mihintsy (géographie) no tiako ho lazaina eto an, tsy misy ifandraisana mihintsy tamin’ny famonjena izay nataon’i JESOSY teo amin’ny hazofijaliana, na ny kely toy ny loha-paingotra aza, tsy misy ifandraisany mihintsy. Inona moa izaho sy ianao no hovenjen’i JESOSY ? Tsy jiosy anie isika e ! Kanefa dia izao : ilay FANAHY TSARA tao anatin’ny Tompo no nanekeny hamonjy anao. Misy tenin’ANDRIAMANITRA miteny amin’ny zanak’Israely manao hoe : « Tsy ny hamaroanareo noho ny firenena rehetra anefa no niraiketan'ny fitiavan'i Jehovah taminareo sy nifidianany anareo, fa ianareo dia vitsy noho ny firenena rehetra aza; » (Deotoronomia 7:7)
« Noho ny anarako dia ononiko ny fahatezerako, ary mba hiderana ahy dia manindry fo aminao Aho, mba tsy hamongorana anao. » (Isaia 48:9)
Tsy noho ny aminao izany, fa noho ny amin’ANDRIAMANITRA no antony itiavany anao.
Teto an, dia nisy olona tena ampy fahalalana no niresaka tamin’i JESOSY. Izany hoe olona tena ampy « bagage » mihintsy izany. « Iza moa amin'izy telo lahy no ataonao ho naman'ilay azon'ny jiolahy? Ary hoy izy: Ilay niantra azy. Dia hoy Jesosy taminy: Mandehana ianao, ka mba manaova toy izany koa. » (Lioka 10: 36-37)
Dia nazava ho azy satria ilay « parabole » « flagrant », ka ahoana moa no hasahianao hiteny hoe ilay mpisorona no mbola tia azy ? Tsy afa-niala intsony, tsy maintsy niteny ! Ilay namonjy azy no tia azy. Ay, mandehana dia manaovà toy izany koa ! Ny antony dia izao, tsy nitovy tamin’izay ny zavatra nataonao teo aloha. Isika ry havana dia ampaherezin’ny tenin’ANDRIAMANITRA foana isika hoe takony ao ambadika mihintsy ny « titre » mety entintsika amin’ny asa fanompoana. Takony ao ambadika mihintsy izany, fa ilay Fanahin’ny Tompo entina. Fa rehefa ao anatinao ny Fanahin’ANDRIAMANITRA mahavita mietry ianao. Mba hisandratanao rehefa avy eo ! Inty olona narary ity, tsy fantatra mihintsy hoe rehefa sitrana izy, mba nifankahita tamin’ilay samaritana izy, tsy fantatra aloha izany fa izao, sitrana izy rehefa avy eo. Tsy nangataka tambiny mihintsy ity samaritana ity an, tsy nanao mihintsy hoe honerako rehefa miverina aho ka noho izany dia asio « facture, cahet… » ; Dia ho hitako eo ny « remboursement ». Inty misy vola, tsaboy io olona io an, rehefa avy eo an, mbola honerako raha mbola tsy ampy. JESOSY no mahay manamboatra. Hoy IZY hoe : « Fa mora ny ziogako, ary maivana ny entako. » (Matio 11:30)
Tsy « artificiel » izany hoe olona tsara fanahy izany. Manana Fanahy Tsara mantsy no dikan’ity. Ity tsara fanahy ity mantsy raha amin’ny endrika ivelany fotsiny an, dia io ilay ataon’ny vazaha hoe : « relatif » izany hoe arakaraky ny olona io. Samy manana ny famaritany koa izany hoe tsara fanahy izany. Fa ny olona na tsy manana an’ANDRIAMANITRA aza, mety ho azo « qualifier »-na ihany hoe mety ho tsara fanahy ny olona, satria afaka manao soa izy… Be dia be izany no azo amaritana izany e ! Fa ilay tsara fanahy tokana eto dia ilay tsara fanahy manana ny FANAHY TSARA, avadiho kely ilay teny. Manana ny Fanahin’ANDRIAMANITRA Izay Tsara sady Mpanao ny tsara. Izay ilay tena hoe manana ny Fanahy Tsara, sy hoe tena tsara fanahy izay olona izay. Manome tsy misy tambiny. JESOSY teo amin’ny hazofijaliana dia nanolotra an’izany, tsy nila tambiny, tsy nila na inona na inona.
Isa-maraina isa-maraina dia omen’ANDRIAMANITRA ny masoandro ; ho an’iza ?
« Mba ho tonga zanaky ny Rainareo Izay any an-danitra ianareo; fa Izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. » (Matio 5:45) Tsy mila tambiny ! Fa raha io masoandro io anie ry havana no ho « facturer »-n’ANDRIAMANITRA amin’ny olona meloka e, na amin’ny olona marina koa aza e, moa ve voavidinao io masoandro io ? Fa omen’ANDRIAMANITRA maimaim-poana izany. Anisan’ny « clé » iray ao anatin’ny tenin’ANDRIAMANITRA : « Ary nony ampitson'iny, dia naka denaria roa izy, ka nomeny ny tompon'ny tranom-bahiny, sady nanao taminy hœ: Tsaboy izy; ary na hoatrinona na hoatrinona no laninao mihoatra noho ireto dia honerako, rehefa miverina aho. » (Lioka 10:35)
Izaho no hanonitra ny laninao rehefa miverina aho. Nanome fampanantenana ny tompon-trano ilay samaritana hoe mbola hiverina eo aho. Mbola hiverina eo izy satria nahoana ? Satria tsara fanahy izy, mba vitanao ve izany ? « honerako rehefa miverina aho. »
JESOSY KRISTY dia nampanantena antsika hoe : « Ary raha handeha hamboatra fitœrana ho anareo Aho, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay itœrako no hitœranareo koa. » (Jaona 14:3)
Any anie ry havana no lokatsika e, any karamantsika rehefa samaritana tsara fanahy isika. Tsy mila tambiny ety amin’izao tontolo izao, tsy mila na inona na inona ety amin’izao tontolo izao, fa ny karamantsika dia izao, rehefa miverina ny Tompo. Raha mbola mitady karama eto amin’izao tontolo izao ianao, dia tsy mbola samaritana tsara fanahy ianao izay. Fa aza mitady karama eto amin’izao tontolo izao. Ny hirantsika teo dia miteny hoe : « amboary aho JESOA ». Ho mora fanahy. Ahoana ny fanoharana ny amin’ny zana-boriky mifatotra ? Alaivo izy dia ento aty. Hatao inona ? Hotaingenako. Ny dikan’ny hoe hotaingenan’ny Tompo amin’ny hevi-panahy dia hamboarina, ho « dresser »-na, ilay zana-boriky tsy mahalala na inona na inona mihintsy, ilay tsy mahalala miantra, fa vao mahita olona dia mitrerona, hamboarin’ny Tompo ho olona tsara fanahy.
Isika anie ry havana na miteny aza tsy haintsika indraindray e ! Mitrerotrerona lava, kristianina ihany fa mitrerotrerona lava ao an-tokatrano ao, kristianina ihany fa tsy mahay mamindra fo mihintsy. Izay no nahatonga ahy hiteny hoe ity samaritana teto ity anie tsy amin’ny maha samaritana azy no nahavoatery azy tsy maintsy ho tsara fanahy, fa noho ny fananany ilay Fanahy tsara tao anatiny. Ka na iza na iza manana Fanahin’ANDRIAMANITRA tsara dia afaka ny ho tsara foana io izany. Maneke mihintsy ianao androny mba hamboarin’ANDRIAMANITRA ny ao anatinao mba ho « dresser »-n’ANDRIAMANITRA tahaka ilay zana-boriky.
Ilay tsy mahay miteny io, omeo an’ANDRIAMANITRA ny molotrao androany. Hoy Mosesy tamin’i JEHOVAH ANDRIAMANITRA hoe, izaho anie hoy izy na hirahinao ho any amin’i Farao aza, izaho anie tsy mahay miteny e ! Dia hoy JEHOVAH ANDRIAMANITRA mantsy azy hoe Mosesy, fa iza no nanao ny vava, moa tsy IZAHO va ? Haiko ny manamboatra an’io.
Io vavanao tsy mahay miteny io, atolory an’i JESOSY io androany. Io tànanao tsy mahay manafosafo io, mamelaka teha-maina lava, atolory an’i JESOSY io androany. Io tongotrao tsy misy fetrany io, fa na aiza na aiza dia alehan’io daholo, hatrany amin’ny « casino » na aiza na aiza…atolory an’i JESOSY io androany. Amin’ity androany ity, izay rehetra tian’i JESOSY an, hamboarina aminao. Tian’i JESOSY hananao, hamboariny daholo izany rehetra izany.
Amboary aho JESOSY mba ho mora fo, mba ho tahaka an’ity samaritana ity, tsy misy ifandraisany mihintsy. Isika amin’izao fotoana izao anie na misy olona marary etsy an-dàlana etsy aza dia efa izay e, tsy misy te hahalala, mandalo daholo ny olona rehetra. Tian’i JESOSY isika mba hanana an’izany. Teo dia nandeha ny fanentanan’ilay rahalahy teo hoe, mandray vahiny isika hoy izy, mba mila olona afaka mampindrana kidoro, hoy ny tenin’ANDRIAMANITRA hoe : « Koa tiava vahiny; fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egypta ianareo. » (Deotoronomia 10:19)
« Miantrà ny olona masina araka izay ilainy; mazotoa mampiantrano vahiny. » (Romana 12:13) Ary tsy vitan’ny hoe vahiny anie ianao no nalaiko tany Egypta hoy ANDRIAMANITRA fa « esclave » anie ianao no navoakako tany e ! Mba tadidinao ve izany ? Raha tsaroana androany, fa nisy zavatra nataon’ANDRIAMANITRA taminao, mazotoa mampindrana e, mazotoa manome ; fa hoy JESOSY aminao hoe : honeraka izany rehefa miverina AHO.
Tsy vola be no angatahintsika amin’ny Tompo rehefa manompo an’ANDRIAMANITRA, tsy « valeur » ihany koa, fa misy « valeur morale » ngeza be izay homanin’ANDRIAMANITRA ho anao. Fa rehefa ho avy JESOSY dia hiteny aminao hoe : « Hoy ny tompony taminy: Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky; nahatoky* tamin'ny kely ianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be; midìra amin'ny fifalian'ny tomponao.[*Na: Ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tsara, etc] » (Matio 25:21)
Eto amin’ity samaritana tsara fanahy ity, ny olona iray rehefa vonona hanao asa iray ho an’ANDRIAMANITRA fa tsy ho an’ilay olona, tsy mijery « valeur » na inona na inona mihintsy. Tsy manao « désir » akory aza raha ny marina. Fa tonga dia mandray andraikitra, JESOSY ô ataoko ity satria izao, ho ANAO no antony hanaovako an’io. Izany ny olona rehefa vonona, fa ny olona rehefa tsy vonona izay, angatahana daholo na « pro format » na inona na inona, avoahy daholo aloha. Ho hitako eo izay hataoko. « Comparer »-na daholo ity rehetra rehetra ity. Ny olona rehefa tena manana ny fanahin’ANDRIAMANITRA, tsy miady varotra lava ry havana, tonga dia manao.
Tena te hanentana anao sy amporisika aminao an’izany mihintsy aho hoe : arakaraky ny anomezanao, no ampitomboin’ANDRIAMANITRA ny ao anaty kitapom-bolanao. JEHOVAH ANDRIAMANITRA anie tena miditra hatrany anaty « ustensile de cuisine » anao mihintsy e ! Vakio ny bokinin’ny Deotornomia sy ny Eksodosy fa milaza izany, « Hotahina ny haronao sy ny vilia fanaova-mofonao. » (Deotoronomia 28:5) Fa aiza moa no misy izany ? any anaty lakozianao anie izany e, ho tahiana hatrany amin’ny sotronao, ny « chambre »-nao, ny zanakao, ny momba anao iray manontolo. Fa izao mankatoavà ny tenin’ANDRIAMANITRA. Ireto mpisorona sy levita ireto anie ry havana nandre ny tenin’ANDRIAMANITRA foana e, fa ny olan’ireo dia zavatra iray fotsiny, fankatoavana. Izay no olan’ireo, tsy nisy fankatoavana. Fa ity samaritana ity, mety tsy nahare akory, fa nanana ny fanahin’ANDRIAMANITRA izy. Mety tsy mahalala « verset biblique » akory anie io samaritana io e, satria tsy nitoriana izany ny samaritana anie raha ny marina e, fa ny jiosy foana no notoriana izany tao Jerosalema, fa ny « avantage »n’ity samaritana ity dia izao, fananany ny fanahin’ANDRIAMANITRA. Tsy nahalala ny tenin’ANDRIAMANITRA betsaka akory izy, fa vao nahita olona marary izy dia hoy izy, tsaboy fa honerako rehefa miverina aho, na ohatr’inona na ohatr’inona laninao. Henjana be anie izany ry havana e, mba avereno vakiana tsara anie izao tenin’ANDRIAMANITRA izao e.
Raha miverina avy any ianao ka ity moa ka mivoaka ny « facture » ny hopitaly ka hoe « 25 million » izay vao hihaotraotra loha angamba hoe an an an diso ilay noteneniko iny fa ny 20% ihany kay no tena izy fa ohatra ny tsy izy iny kah. « Na ohatr’inona na ohatr’inona laninao » Ny dikan’izany dia izao, azon’ilay samaritana antoka tsara mihintsy, fa raha mbola misy fanahy tsara ao anatiny zakany ny « facture » an’io olona io na ohatr’inona na ohatr’inona. Henjana be anie izany e, ny « avance » efa nomena, tsy vitatsika mihintsy izany ry havana raha tsy manana ny fanahin’ANDRIAMANITRA isika a, tsy ho vita mihintsy izany ! Na inona na inona ezaka mety hataontsika fa izao, raiso JESOSY fa ho vitanao izany rehetra izany rehefa avy eo.
Ilay zanaka adala anie rehefa fantany fa sakafon-kisoa no nohaniny, dia nanapa-kevitra izy hoe hiainga aho hoy izy ; inona iny fanapahan-kevitra iny ? Efa tsy niantehitra tamin’ny « sentiment » intsony, satria teo aloha mbola « sentiment » fotsiny : tena sakafon-kisoa, tena tsy lasa intsony ity ! Ry zalahy ary izao mihinam-be, ny any an-tranon’i dada izao « pizza » no hanina an, izaho eto, zara raha misy tsaramaso maina vao mangotraka ! « Sentiment » izany, mbola « sentiment ». Fa niainga amin’izay rehefa avy eo, hiainga mihintsy aho hoy izy. Lasa izao, tsy mijanona intsony. Vao niainga tamin’iny izy an, ny dadany ary efa honena.
Androany ry havana, tena miteny aminao aho amin’ny Anaran’i JESOSY, vao miainga fotsiny ianao hiala amin’ny ratsy fanaonao rehetra androany. ANDRIAMANITRA efa honena anao, azo antoka 100% izany.
Ilay samaritana tsara fanahy anie, tsy mahay « verset biblique » be dia be e, fa ny azo antoka dia izao, ilay fanahy ao anatiny mihintsy no tsara. Izay no maha samaritana tsara fanahy azy. Mba meteza androany mba ho malagasy tsara fanahy e. Dia miteny hoe honerako rehefa miverina aho. Fa hiteny aminao koa JESOSY hoe honerako koa ny anao rehefa miverina AHO e ! Aza matahotra fa honerako koa ny anao rehefa miverina AHO.
Izay namafy tamin’ny kely, dia kely koa no ho jinjainy, izay namafy tamin’ny be dia be koa no hojinjainy. Hamaranako azy dia izao, ity samaritana ity, niaina tamin’ny atao hoe fahasoavan’ANDRIAMANITRA, tsy « titre », tsy fianarana, tsinontsinona mihintsy no zavatra nentiny fa izao fahasoavan’ANDRIAMANITRA fotsiny. « tsaboy, honerako rehefa miverina aho ! » Amin’izao fotoana izao an, miaina ao anatin’ny atao hoe fahasoavan’ANDRIAMANITRA isika. Raha namaky baiboly aho tamin’ny maraina an, misy tenin’ANDRIAMANITRA roa, izay tena nanintona mihintsy amin’ilay hoe « vita », izay midika fahasoavan’ANDRIAMANITRA lehibe.
Ilay « vita » voalohany dia izao, ilay notenenin’i JESOSY teo amin’ny hazo fijaliana ; rehefa niantona teo amin’ny hazofijaliana IZY an, nangetaheta IZY ary niteny mihintsy teo amin’ireo olona iangona teo Golgota hoe « Ary rehefa afaka izany, dia fantatr'i Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay, mba hahatanteraka ny Soratra Masina, dia hoy Izy: Mangetaheta Aho. » (Jaona 19:28) Valin’ilay hetaheta ? « Ary ny anankiray nihazakazaka, dia nanatsoboka sipaonjy tamin'ny vinaingitra, ka notohiziny tamin'ny volotara, dia natohony hotsentsefin'i Jesosy, fa hoy izy: Aoka ho hizahantsika, na ho avy hampidina Azy Elia, na tsia. « Ary ny miaramila koa nihomehy Azy, dia nankeo ka nanome Azy vinaingitra, » (Lioka 23: 35-36) Koa satria izay no valin’ny hetaheta izay efa nandrasany ; « Ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy, dia nanao hœ: Vita ; dia nanondrika ny lohany Izy ka nanolotra ny fanahiny. » (Jaona 19:30) Ka izay izany no valiny omentsika AZY. Vita ny famonjena ! Vita ny AHY, fa ny anareo kosa ahoana hoy JESOSY. Mangetaheta anao IZY amin’izao fotoana izao !
Fa ny « vita » faharoa, dia ny any amin’ny bokin’ny Apokalipsy, izay bokin’ny faminaniana, misy roa izy ao anaty baiboly, bokin’i Daniela, ary Apokalipsy, izay faminaniana ny zavatra mbola ho avy. « vita », manambara ny amin’ilay loza fito farany, hitsofan’ny anjely ny trompera farany indrindra. Ary hitsangana ny Zanak’ondry, eo an-tànan-kavanan’ANDRIAMANITRA RAY hanakatona ny varavaran’ny tempoly, tsy misy vavaka azo raisina intsony manomboka eo, fa amin’ity androany ity mbola fotoam-pahasoavana izao.
Manasa anao JESOSY androany, aza avela hikatona izany varavaram-pahasoavana izany. Satria tsy fantatsika anie na amin’ity androany « après-midi » ity ka ho tsofina ny trompetra farany e, hitsangana ny Zanak’ondry, izay mipetraka eo an-kavanan’ANDRIAMANITRA Ray, hanakatona ny varavaran’ny tempoly dia hiteny hoe « vita » fa izay no voalazan’ny Apokalipsy, « Ary ny fahafito dia nampidina ny tao an-doviany tamin'ny rivotra; dia nisy feo mahery nivoaka avy tao amin'ny tempoly, teo amin'ny seza fiandrianana, nanao hœ: Vita. » (Apokalypsy 16:17)
Ilay « vita » an’i JESOSY KRISTY teo amin’ny hazo fijaliana, milaza hoe « vita » ny famonjena, handray ianao sa tsy handray ?
Fa ity « vita » fanindroany ao amin’ny Apokalipsy ity dia ilay « vita » mbola ho avy, ka raha vao voateny io teny vita io, tsy misy vavaka azo raisina intsony. Fa mikatona ny varavaran’ny tempoly, ary izay any ivelany tavela. Izay ao anatiny hiaina ny fahasoavana mandrakizay.
Meteza androany mba ho malagasy tsara fanahy. Malagasy izaho sy ianao, andao isika androany mba hangataka amin’i JESOSY mihintsy hoe : « mba maniry aho JESOSY mba ho tena malagasy tsara fanahy, tahaka ilay samaritana tsara fanahy, tsy amin’ny maha-samaritana azy, fa ny amin’ny fanekeny an’i JESOSY ho Tompo sy Mpamonjy azy. » Mino aho fa hanaiky izany isika androany.
« Tsy hanontolo fo Aho, na handringana an'i Efraima intsony; Fa Andriamanitra Aho, fa tsy olona, dia ny Iray Masina ao aminao, ka dia tsy ho avy amim-pahatezerana mirehitra* Aho. [Na: tsy hiditra ao an-tanàna Aho] » (Hosea 11:9)
Raha latsaka ao am-ponao izany tenin’ANDRIAMANITRA izany dia izao, meteza hamboarin’ny Tompo. Fa hoy ny tenin’ANDRIAMANITRA hoe : « Izay rehetra omen'ny Raiko Ahy no hanatona Ahy; ary izay manatona Ahy dia tsy mba holaviko mihitsy. » (Jaona 6:37)Na samaritana izany na malagasy izany na frantsay na iza na iza, dia mbola tian’i JESOSY indray ianao hanatona AZY androany.